တရုတ်မြင့်မားသောမာကျောသောပစ္စည်းများအတွင်းတွင်အရည်ခံနိုင်သောဂျက်စက်ကိုအထူးအသုံးပြုသည်။ စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Qiangdi
●ကြွေပြားများ (သို့) SiO (သို့) Carborundum အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးများသည်မာကြောမှုသည်သံမဏိထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကွဲပြားခြားနားသောမာကျောသောထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီရန်။
● PU (သို့) ကြွေထည်များကိုဆိုင်ကလုန်းခွဲစက်နှင့်ဖုန်စုပ်စက်ထဲသို့ကပ်ထားပါ။
ဂျက်စက်ကြိတ်ခွဲစက်တွင်ကြိတ်ခွဲစက်၊ မုန်တိုင်း၊ သန့်စင်ထားသော၊ ရေနှင့်လေမှုတ်ထားသောလေများကိုလေမှုတ်ထုတ်သည့်အရာကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ထုတ်လွှတ်သည်။ ပစ္စည်းသည်ဖိအားမြင့်လေယာဉ်လေးစီး၏ပူးတွဲဖြင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကြိတ်ခွဲပြီးနောက်ဆုံး၌ပျော့ပြောင်းသည်။ ထို့နောက်ပစ္စည်းများကို centrifugal force နှင့် centripetal force အောက်တွင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးခွဲခြားသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသောအမှုန်များကိုဆိုင်ကလုန်းနှင့်အိတ်စစ်ထုတ်စက်များကကောက်ယူသည်။
မှတ်စုများ -2m3 / min မှ 40 m3 / min အထိ compressed air စားသုံးမှု။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်သင်၏ပစ္စည်း၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အက္ခရာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ခန်းများ၌စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤစာရွက်တွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းအဆင်တန်ဆာများ၏အချက်အလက်များသည်သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်, ပြီးတော့ဂျက်ကြိတ်စက်၏တ ဦး တည်းမော်ဒယ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ပေးလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်ကိုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများ၏သန့်ရှင်းမှုကိုသေချာစေရန် ၁.Precision ကြွေထည်မြေထည်၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆန့်ကျင်သောအကျီ။ အထူးသဖြင့် WC, SiC, SiN, SiO ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောမာကျောသောထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်လျော်သည်2 နောက် ... ပြီးတော့။
၂။ အပူချိန်တိုးမြင့်ခြင်းမရှိပါ။ အပူချိန်တိုးလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အရာ ၀ တ္ထုတိုးချဲ့ခြင်း၏အလုပ်အခြေအနေအောက်တွင်ပစ္စည်းများကို pulverized ဖြစ်သဖြင့်ကြိတ်ဆုံတွင်းရှိအပူချိန်ကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
3. အာမခံချက် - ကြွေပြား (သို့) SiO (သို့) Carborundum နံရံများကို Mohs Hardness Grade5~9ဖြင့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။ ကြိတ်ခွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နံရံနှင့်တိုက်မိခြင်းထက်အစေ့များအကြားသက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်မိခြင်းသာဖြစ်သည်။ အပြီးသတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုအတွက်ကြိတ်တစ်လျှောက်တွင်သတ္တုနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း။
4. ဘီး၏အမြန်နှုန်းကို converter ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားကိုလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိနိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဘီးသည်အပြီးသတ်ပစ္စည်းများကိုလေစီးဆင်းမှုနှင့်အလိုအလျောက်ခွဲခြားထားပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောပစ္စည်းများ၏ထိရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Ultrafine အမှုန့်ထုတ်ကုန်သည်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
Flowidized-bed Jet Mill ၏ Flow ဇယား
- Process ကိုစောင့်ကြည့်, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်
- software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီ application programming
- ဆောက်လုပ်ရေး site ကိုကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
- turnkey ဖြေရှင်းချက်, စက်ရုံအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီဖြေရှင်းနည်းများ
ရှေ့သို့ လူကြိုက်များသောအမျိုးအစား Fluidized-bed Jet Mill
ဂျက်စက်စက်ရုံ WP စနစ် - Agrochemical သို့လျှောက်ထားပါ။